Canadanepal.net: सुष्मा कार्कीे पुगिन प्रहरी चौकी ! स्वेता खड्काकी बहिनी र उत्सव रसाइलीले कुटेको भन्दै उजुरी हालिन्
सुष्मा कार्कीे पुगिन प्रहरी चौकी ! स्वेता खड्काकी बहिनी र उत्सव रसाइलीले कुटेको भन्दै उजुरी हालिन्
नायिका सुस्मा कार्कीले अर्की नायिका स्वेता खड्काकी बहिनी आरती खड्का र पत्रकार उत्सव रसाइलीविरुद्ध उजुरी दर्ता गरेकी छन् । सुस्माले उनीहरुविरुद्ध महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गमा गा’ली ग’लौ’ज र कु’ट’पि’ट गरेको भन्दै उजुरी दिएकी हुन् । वृत्तले दिएको जानकारीअनुसार उजुरीमा आरती खड्का र उत्सव रसाइलीले गा’ली’ ग’लौ’ज गरेको र कु’ट’पि’ट गरेको भन्दै उजुरी दिएकी हुन् । सोमबार राति दरबारमार्गको लण्डन पबमा उनीहरुबीच झ’ग’डा भएको थियो । सो पबमा आफूमाथि आरति र उत्सवले गा’ली ग’लौ’ज र कु’ट’पि’ट गरेको भन्दै उनले उजुरी दिएकी वृत्तका प्रहरीले जानकारी दिएको छ । सुष्माले आरति र उत्सवको सम्पर्क नम्बर नदिएकाले यसबारे थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन समस्या भएको वृत्तले जानकारी दिएको छ । दुवै पक्षलाई छलफल गराउने वा कानुनअनुसार अघि बढ्ने भन्नमा प्रहरी निर्णयमा पुगिसकेको छैन । प्रहरी परिसरबाट बाहिरिंदै गर्दा सुष्मा कार्कीले भनिन्, “म र उत्सव रसाईली बीच केही कुरामा विवाद भएको थियो जुन सामान्य नै हो तर उत्सवले मलाई केटाहरु ल्याएर कु’टा’उ’छु देखि उक्त पबबाट निकाल्नु भन्दै ध’म्का’उ’न थाले । त्यस पश्चात स्वेता खड्काले समेत मलाई मुख छा’डेकी छिन र स्वेताको बहिनी आरती खड्काले भने मलाई हा’त हा’लेकी छिन् ।” सुष्माका अनुसार अरु जे भएपनि ‘हा’त हा’ल्नुहु’दैन थियो त्यसैले आफू प्रहरीमा उजुरी दिन आएकी हुन् । सुष्माका अनुसार घटनाको सबै भिडियो आफूसंग रहेको र प्रहरीलाई बुझाएको समेत बताएकी छिन् । नायिका सुष्मा कार्कीले घटनाको भिडियो रेकर्ड समेत भएको बताइन् । उनले भनिन् ‘मसँग सबै भिडियो रेकर्डहरु छ । अब, जे बोल्छ भिडियोले नै बोल्छ ।’ नायिका स्वेता खड्काले आफूलाई नराम्रो शब्द प्रयोग गरेको सुष्माले दाबी गरेकी छिन् ।